Izalele ethekethekeningeVW Polo TSI entsha | Isolezwe
Izalele ethekethekeningeVW Polo TSI entsha
ezezimoto / 11 March 2018, 4:49pm / FANELESIBONGE BENGU
KUBONAKALA sengathi ifike sebevele beyilindele ngabomvu abathengi iVW Polo eNingizimu Afrika njengoba idayise ubuthaphuthaphu ngoFebhuwari.
Ngokwezibalo zokuthengwa kwezimoto zangenyanga eyedlule kuvela ukuthi kudayiswe amaPolo angu-2 847.
Lokhu akwethusi ngoba iPolo iyimoto esizakhele ugazi kubantu bakuleli ngokuba yimoto abangathembela kuyo futhi ongangeni ugamanxe ephaketheni uma uyidinga.
Le Polo yesizukulwane sesithupha ihluke kakhulu kunendala.
Ububanzi bayo bungu-1 751mm kanti ukuphakama kwayo kuncishiswe ngo-8mm njengoba sekungu-1 461mm. Ubude bayo nabo bunyukile njengoba sebungu-2 548mm kanti ne-wheelbase isithe ukuthi xaxa.
Konke lokhu kuyenze yathi ukuvuleka ukuze abagibeli bahlale ngokukhululeka kanjalo nesikhala sempahla ebhuthini naso sithe xaxa kwazise sesingu-350 litres, yize ngokwami ngisibone sigcwaliswa wubala.
Uma uyibuka ngaphandle inhle. Ngaphambili igqame ngamalambu akhanya ubusuku nemini angamaLED asezansi.
Iphinde ibe ne-chrome egudla ngezansi kwi-ventilation grille. Amalambu ayo makhulu.
Emaceleni ishaya ngama-criss ayenza ibukeke kahle bese inyathela ngamasondo agaxwe amarimu angu-16 inch.
Uma ungena ngaphakathi ufica izinto ezifana neComposition Media infotainment system eyi-8 inch colour display touchscreen. Ibukeka sengathi yi-tablet uma unganakile. Ikwazi ukudlala iSD card, AUX, USB futhi iveza iselula uma usebenzisa i-iPhone, Bluetooth neCD.
Izihlalo zingamaSport seats, ine-cruise control ne-speed limiter kanti kwi-dashboard iyakhanya okuyenza ibukeke kahle kanjalo nasezicabheni ngaphambili nakwi-instrument panel.
Ngaphakathi yakhiwe kusetshenziswa izinto eziseqophelweni eliphezulu.
Ngaphansi kwebhonethi inenjini eyi-1.0 TSI three cylinder engine turbocharged. Le njini ifuqa amandla angu-85 kW netorque engu-200 Nm. Ebesihamba ngayo ibino-gearbox ozishintshayo oyi 7-speed DSG kanti uma uthanda ufaka oyi-6 speed manual.
Emgwaqweni ithule ngaphakathi futhi intofontofo nengicabanga ukuthi ingenye yezihamba phambili ngalokhu esigabeni sayo. U-gearbox wayo unamagiya angena ngokushesha ukuze ikongele kuphethroli futhi ayizwakali uma ishintsha.
Umshayeli uyazikhethela ukuthi ufuna ihambe kanjani ngokuyifaka ku-Eco, Normal, Sport no-Individual. Ukufika ku-100km/* kuyithatha imizuzwana engu-9.5 kanti ijubane layo elikhulu lingu-200km/* .
Ungafunga ukuthi injini inkulu uma isihamba ngoba inamandla futhi okuhle ngayo ukuthi iyonga.Ngebanga lika-100km ibisebenzisa amalitha kaphethroli angu-6.2.
Buningi ubuchwepheshe obusiza umshayeli efika nabo nongakwazi ukubufaka uma uthanda.
Buhlanganisa iBlind Spot Monitor neRear Traffic Alert, Park Assist futhi inekhamera eyenza ukuthi izipake yona, Driver Alert System etshela umshayeli ukuthi kumele aphumule, Multi Collision Braking (Automatic Post-Collision Braking System) eyenza ukuthi uma isishayisile ibhreke ukuze ingaqhubeki yenze enye ingozi, futhi ineTyre Pressure Loss Indicator etshela umshayeli ukuthi kunesondo eselincishelwe umoya.
Kuningi okunye ongakufaka njenge-Active Info Display engu-11.7-inch futhi kusukela ngekota yesibili yakulo nyaka ungakwazi ukuthatha iR-Line package eyenza ibukeke kahle njengoba ifika namarimu angu-17 inch, spoiler nokunye.
Uma uthanda futhi uyenza ikhanyise ngamalambu ayiLED ne-panoramic sunroof okhakhayini.
Kusekude ukuthi izimbangi ziyifice iVW Polo ngoba isazoqhubeka nokudayisa ubuthaphuthaphu ngenxa yokuba sezingeni kwayo. Ngenani layo uthola imoto ephelele futhi ongathembela kuyo.
1.0 TSI 85kW Highline DSG R302 200
Ifika ne-warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000km, service plan yeminyaka emithathu noma u-45 000km kanti kumele iye kwisevisi njalo ngemuva kokuhamba u-15 000km.